တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရွှေဘုန်းပွင့်စေတီတော်နှင့် စူဠာမုနိစေတီတော်သို့သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညို » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ – ၁၃
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်းနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လင်းအောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီး ယနေ့ညပိုင်းတွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ့ ရွှေဘုန်းပွင့်စေတီတော် နှင့် စူဠာမုနိစေတီတော်သို့သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုသည်။
ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဇနီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ရွှေဘုန်းပွင့်စေတီတော်သို့ရောက်ရှိကြရာ စေတီတော်ကြီး၏ဂေါပကအဖွဲ့နာယက ဦးအောင်ကိုဝင်းနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့သည် စေတီတော်ကြီးရှိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်အား ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီးများကပ်လှူပူဇော်ကြပြီး စေတီတော်ကြီးအားလက်ယာရစ်လှည့်လည် ဖူးမြော်ကြည်ညိုကြသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊လေ) မိသားစုများမှလှူဒါန်းသည့် အလှူငွေများအားဂေါပကအဖွဲ့ထံပေးအပ်လှူဒါန်းပြီး ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး၍ ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ဆက်လက်ပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဇနီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် စူဠာမုနိစေတီတော်သို့ ရောက်ရှိ ကြပြီး စေတီတော်ကြီးရှိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်အားဖူးမြော်ကြည်ညို ၍ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီးများကပ်လှူပူဇော်ကြပြီး လက်ယာရစ်လှည့်လည်ဖူးမြော်ကြည်ညိုကြသည်။ ထို့နောက်တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊လေ) မိသားစုများမှ လှူဒါန်းသည့်အလှူငွေများအား ဂေါပကအဖွဲ့ထံပေးအပ်လှူဒါန်းပြီး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ် ရေးထိုးကာ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တောငျကွီးမွို့ရှိ ရှဘေုနျးပှငျ့စတေီတျောနှငျ့ စူဠာမုနိစတေီတျောသို့သှားရောကျဖူးမွျောကွညျညို
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျသညျဇနီး ဒျေါကွူကွူလှ၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ(ရေ)ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျးနှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ)ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော နှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ အရှပေို့ငျးတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျလငျးအောငျနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားလိုကျပါပွီး ယနညေ့ပိုငျးတှငျ တောငျကွီးမွို့ရှိ့ ရှဘေုနျးပှငျ့စတေီတျော နှငျ့ စူဠာမုနိစတေီတျောသို့သှားရောကျဖူးမွျောကွညျညိုသညျ။
ဦးစှာတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဇနီးနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ရှဘေုနျးပှငျ့စတေီတျောသို့ရောကျရှိကွရာ စတေီတျောကွီး၏ဂေါပကအဖှဲ့နာယက ဦးအောငျကိုဝငျးနှငျ့ ဂေါပကအဖှဲ့ဝငျမြားကကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။ ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီးတို့သညျ စတေီတျောကွီးရှိဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောမွတျအား ဖူးမွျောကွညျညိုပွီး ပနျး၊ ရခေမျြး၊ ဆီမီးမြားကပျလှူပူဇျောကွပွီး စတေီတျောကွီးအားလကျယာရဈလှညျ့လညျ ဖူးမွျောကွညျညိုကွသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ တပျမတျော (ကွညျး၊ ရေ၊လေ) မိသားစုမြားမှလှူဒါနျးသညျ့ အလှူငှမြေားအားဂေါပကအဖှဲ့ထံပေးအပျလှူဒါနျးပွီး ဂေါပကအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့မှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျကူး၍ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ လကျမှတျရေးထိုးသညျ။
ဆကျလကျပွီးတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဇနီးနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ စူဠာမုနိစတေီတျောသို့ ရောကျရှိ ကွပွီး စတေီတျောကွီးရှိဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောမွတျအားဖူးမွျောကွညျညို ၍ပနျး၊ ရခေမျြး၊ ဆီမီးမြားကပျလှူပူဇျောကွပွီး လကျယာရဈလှညျ့လညျဖူးမွျောကွညျညိုကွသညျ။ ထို့နောကျတပျမတျော (ကွညျး၊ ရေ၊လေ) မိသားစုမြားမှ လှူဒါနျးသညျ့အလှူငှမြေားအား ဂေါပကအဖှဲ့ထံပေးအပျလှူဒါနျးပွီး ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးတှငျ လကျမှတျ ရေးထိုးကာ ဂေါပကအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ မှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျကူးခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တောင်ကြီးတပ်နယ်ရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအားတွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဘုရင့်တော်ဝင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစီမံကိန်းသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြည်လည်ရောက်ရှိ(ရုပ်သံသတင်း)
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင် ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနှင့် သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခြင်း(ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
(၃၁)ကြိမ်မြောက်သာသနာ့ဝန်ဆောင်သာမဏေကျော် စာတော်ပြန်ပွဲဖြေဆိုနေသည့် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပန်ကွဲကျေးရွာအနီးရှိ ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်တော်ပရိဝုဏ်အတွင်း တည်ထားကိုးကွယ်မည့် သတ္တသတ္တာဟမဟာဗောဓိစေတီတော်မြတ်ကြီး တည်ဆောက်ပူဇော်ခြင်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အလှူတော်ငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲသို့ တက်ရောက် (ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ခေါင်လန်ဖူးမြို့ရှိ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့စစ်ဌာနေအဖွဲ့ဝင်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ၊ ပူတာအို-ခေါင်လန်ဖူး လမ်းဖောက်လုပ်နေမှုအား ကြည့်ရှု ၊ ပူတာအိုတပ်နယ် ဧက(၅၀၀) ဘက်စုံ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံ(နမ့်တာလဲ) သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ကောင်းမှုလုံစေတီတော်အား ဖူးမြော် ကြည်ညို၊ နောင်မွန်မြို့နှင့် ပူတာအိုခရိုင်ရှိ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြည်သူ့စစ်ဌာနေအဖွဲ့ဝင်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ၊ မဂွေဇ – ခေါင်လန်ဖူး လမ်းဖောက်လုပ်နေမှုအား ကြည့်ရှု (ရုပ်သံသတင်း)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၉ Admin 0